Apetraho amin'ny endriny Emojis ianao noho ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Azoko antoka fa tsy mifampiresaka ny ankamaroan'ny olona raha tsy mampiasa emoji ary io emoji io dia singa ahafahantsika mampita ny hevitry ny teny na andian-teny amin'ny sary tokana na aleo amin'ny sary vetograma.
Ireto emoji ireto dia tena ekena amin'ny tambajotra sosialy sy hafatra WhatsApp, malaza be ankehitriny, fa ho antsika izay mampiasa Adobe Photoshop dia ilaina ny mahafantatra ny fomba fametrahana azy ireo amin'ny asantsika sy hahafantarana ny fampidirana emoji, ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia izy ireo no pictograms.
1 Inona ireo sary an-tsary?
2 Fa ny fanontaniana apetraky ny maro amintsika dia ny fomba ampidirantsika ireo glyphs?
Inona ireo sary an-tsary?
Ireo piktograma dia tarehimarika izay hanome antsika karazana mampiavaka ho an'ny marika manokana.
Mety ho izy ireo endri-tsoratra manokana miaraka amin'ny sary, toerana, firavaka ary marika ary ny hoe pictograms dia matetika ampiasaina amin'ny tanjona dia teny iray. Ireo dia azo alefa amin'ny Illustrator avy amin'ny menio omentsika ny varavarankely ary avy eo mandefa hafatra, eo no hisafidianantsika ireo piktogramy.
En InDesign Hitady ny takelaka Text izahay ary homentsika an'i Glyphs izany ary amin'ny Photoshop dia handeha eo am-baravarankely izahay ary homentsika ny glyphs.
Ny zava-baovao dia izay Photoshop dia manohana endritsoratra SVG Ary ny maha samy hafa an'ireo endritsoratra sy OpenTypes ireo dia manome antsika loko sy gradien maromaro amina piktogramy tokana, izany dia zavatra lehibe izay tena ilaina tokoa.
Photoshop amin'ny endriny farany dia manana ny Trajan EmojiOne endri-tsoratra sy loko, ireo endri-tsoratra emoji ireo dia andiana endritsoratra SVG. Ny fampiasana endrits emoji dia mety tafiditra ao anatin'ireo litera maro loko sy antontan-taratasinao, toy ny saina, tsiky, takelaka, famantarana, olona, ​​biby, marika, ary sakafo.
koa azo atao ny manao glyph mifangaro toy ny famoronana sainan'ny firenena miaraka amina glyphs font font BR EmojiOne na azonao atao koa ny manova ny loko isan-karazany an'ny olona. Ireo fitambarana ireo dia azo foronina fipihana indroa amin'ny glyph ary avy eo indroa amin'ny iray hafa, ity dia hampiditra ny glyph ho iray.
Ohatra, azonao atao ny manindry indroa amin'ny glyph B ary indroa amin'ny glyph R ary hahafahanao mamorona ny sainan'i Brezila ary ho an'ireo sainan'i Etazonia, Bolivia ary France dia afaka manao fomba mitovy amin'izany ianao amin'ny famoronana azy ireo.
Fa ny fanontaniana apetraky ny maro amintsika dia ny fomba ampidirantsika ireo glyphs?
Voalohany indrindra miaraka amin'ny Fitaovana an-tsoratra, hapetratsika ny teboka fampidirana ampidirantsika toetra.
Dia hanao izany isika hampavitrika ny tontonana glyph ary ao amin'io takelaka io ihany no ahafahantsika misafidy ny fianakaviana font ary aorian'ny fanitsiana ny sokajin-tsoratra dia manohy mifidy kaody loharano ianao hahita ny zava-drehetra.
Raha nifantina iray ianao Endritsoratra iray karazana Azonao atao ny manokatra menio mipoitra misy glyphs hafa, manao izany ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny boaty glyph. Iray amin'ireo tombony azo amin'ny endri-tsoratra OpenType ny miankina amin'ny endritsoratra tsirairay nofidinao, ny fitsaboana sarotra amin'ny fiteny sasany dia hotohanana, toy ny ny rohy misy eo amin'ireo tarehin-tsoratra.
Aorian'ny hahitanao ny glyph tianao ampidirina dia tsy maintsy tsindrio indroa eo amboniny ianao, dia hiseho eo amin'ny teboka fampidirana ny lahatsoratra ny toetra.
Raha manontany tena ianao izao ahoana no ahafahanao manolo ny endri-tsoratra amin'ny pictogram, holazainay aminao fa ity dia mora kokoa noho ny toa azy ary ny zavatra voalohany tokony hataonao dia safidio ny toetra hanoloRaha manana piktogramy farafahakeliny farafaharatsiny ity endri-tsoratra ity dia hiseho ho azy ny menio miaraka amin'ireo safidy hafa azonao ampiasaina.
Avy eo tsy maintsy tsindrio ny glyph havanana ao amin'ny menio lojika nofidinao ary hosoloina izy io. Raha tsy ao anaty menio misy ny glyph dia tsy maintsy tsindrio ny zana-tsipika ankavanana sy hisolo ny toetra amam-panahy voafantina ianao dia tsy maintsy manindry indroa amin'ny glyph eo amin'ny tontonana glyph.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Emojis ao amin'ny Photoshop
Fironana famoronana 2017